Hirriba waliin walqabatee 'wantoota fayyaa keessan miidhan' - BBC News Afaan Oromoo
Hirriba ilaalchisee yaadonni jiran fayyaa keenya fi miira keenya miidha; akkasumas umurii keenya gabaabsa jedhan qorattoonni.
Gareen qorattotaa Yunvarsiitii Niiwuu Yoork irraa ta'an dhimmoota hirriba alkanii waliin walqabatee ka'an ilaalaniiru.
Qorannoo barrulee Sleep Health jedhamu irratti baasaniin ragaa saayinsaawaa ta'e waliin dhimmoota hirriba waliin walqabatanii ka'an ilaalaniiru.
Hirriba waliin walqabatee yaadota jiran akka ta'utti beekuun fayyaa qaamaafi sammuu akkasumas jiruu namaa namaaf foyyeessa jedhanii abdatu qorattoonni kunneen.
Hirribni hangas waan barbaachisaadhaa?
Kanaaf, meeqan keessanti yaadawwan hirriba waliin walqabatee jiruuf saaxilameera?
Ilaalcha/barmaata 1 - Guyyaatti saatii shanii gadiif hirriba rafuutti baruu ni dandeessa
Yaadni kun yaada akkasumatti dhiisuun hin danda'amnedha.
Ministirri Muummee Biritish duraanii Margaret Thatcher halkan tokko keessatti hirriba saatii afur qofa qabdi ture jedhama. Chaansilarri Jarman Angela Merkelis akkasuma jedhama.
Qaamaan sireerra ciisanii yaada qalbiin ammoo waajira keessa saatii muraasaaf deddeebi'uun hojii biizinasiifi namoota hojii uumuun milkaa'aniif waan baramedha.
Ta'ulleen qorattoonni kunneen yaadni/amantaan hirribaa guyyaatti saatii shanii gadi ta'e ga'aadha jedha yaada dogoggoraa fayyaa keenya miidhu akka ta'e dubbatu.
"Guyyaa tokko keessatti saatii shaniifi isaa gadi qofaa hirriba rafuun fayyaa keenya irratti rakkoo hamaa akka fiduu danda'u ragaa ball'aa dhiyeessinu hedduu qabna jedhu," qorattoota keessaa tokko kan ta'an Dr. Rebecca Robbins.
Rakkoowwan fayyaan qaqqabuu malan dhukkuboota sirna onneefi marsaa dhiigaa waliin walqabatan kan akka onneen dhabbachuufi dhiigni sammuutti dhangala'uu, akkasumas umuriin gababbachuu dabalata.
Kana waan ta'eefis, alkan tokko keessatti namni kamiyyu saatii torbaa hanag saddetii rafuudhaaf karoofachuu qaba jechuun yaada furmaataa dhiyeessiti qorattuun kun.
Ilaalcha/barmaata 2 - Rafuu dura alkoolii dhuguun akka rafnu nu taasisa kan jedhu
Gareen qorattootaa kun akka jedhanitti dhugaatii alkaniin of bashanansiisuun wayinii haata'u, wuskii yookaan ammoo biiraallee barmaatiin jiru ofii isaatiiyyu ifa miti.
"Akka hiribi si qabatu si taasisuu ni mala ta'a, garuu halkan guutuu hirriba nagaa ati qabaachuu maltu akka malee xiqqeessa," jetti Dr. Rebeccan.
Keessattii sadarkaa hirribaa keessaa barbaachisaa kan ta'e sochii baallee ijaa (libsuu ijaa kee) REM kan jedhamu si jalaa jeeqa.
Alkoolii fudhattanii rafuu ykn hirribni dafee isin qabachuu danda'a garuu bu'aawwan hirribaa barbaachisoo ta'an ammoo si dhowwata.
Alkooliin dhangala'aa waan ta'eef bokoksee waan nama guutuuf halkan walakkaallee hiriba irraa nama jeequu danda'a.
Ilaalcha/barmaata 3 - Sireerra ciisanii TV daawwachuun akka diriirfatan/boqotan nama gargaara
"Osoo gara hirribaa hin deemiiniin dura TV daawwachuun sammuu haaromsachuu/diriirfachuun qaba" jettanii yaaddanii beektuu?
Gaariidha, yeroo oduuwwan/tatewwan nama hawwatan jiran akka TV daawwatan nama taasisan jiran hirribaaf gadheedha.
Dr. Rebecca'n akka jettutti: "Yeroo hedduu TV yeroo daawwannu keessumaa oduu halkanii yeroo daawwannee booda rafuu yaallu akka muddamnu ykn jeeqamnu nu taasisa."
Fakkeenyaaf, diraamaa dheeraan beekamaa 'Game of Thrones' jedhamu waggoota dheeraadhaaf darbaa jiru keessaa kutaa 'the Red Wedding' jedhamu daawwate sammuu bohaareen ni rafa jedhamee hin yaadamu.
TV waliin walqabatee kan jiru kan biraan kanumti kana fakkaatu, mobaayilootaafi taabiletoota ifa uumanidha. Ifti mobaayilaafi taabileetota irraa namatti ifan hormoonii melatonin jedhamu hirribaaf omishamu akka turu taasisa.
Ilaalcha/barmaata 3 - Yoo rafuudhaa kan wallaansoo qabdu ta'e, sireedhumarra turi
Sireerra hirkattanii akka hirribni isni dhufuuf yaaltaniittu ta'a. Yookaan baayyinni loonii biyya keenya keessa jiran lakkooftaniittu ta'a.
Kanaaf, ammas yoo hirribni isin dhufuu dide itti fuftanii lakkaa'uma qabduu? deebiin isaa irra deebitanii yaaluu hin qabdaniidha.
"Yeroo akkas goonu kana siree keenya bakka muddamaa waliin walfakkeessaa dhufna," jetti Dr. Rebecca'n.
"Erga sireerra baatanii daqiiqaa 15 keessatti hirribni isni fudhannaan inni hirriba fayyaalessadha, garuu isaa ol isin fudhannaan, siree keessani irraa ka'aa deemaa. Bakka jijjiiradhaatii waanta tokko kan akkasumaan ta'e tokko dalagaa."
Fakkeenyaaf kaalsii keessanillee daddachaafachuu dandeessu.
Ilaalcha/barmaata 5 - Bilbila cufachuu ilaalchisee
Namoonni sagalees yaa ta'u sochiin mobaayila keessanii hirriba keenya ni jeeqa jettanii fala itti gootan meeqan keessan? Yoo mobayilli keessan isin jeequu hirriba keessan addaan kute daqiiqaan itti aanan jijjiirama ni fida.
Fakkeenyaaf, yeroo allaarmiin isinitti iyyee dammaqxanii dhaamsitan mobaayiliin keessan ni dhaama isin garuu ni dammaqxu jedhu qorattoonni kun.
Dr. Rebecca'n akka jettutti:"Dadhabiin hirriba keessaa kaatanii sagalee isin jeequ maqsuu dandeessu. Garuu yeroo
Kan gorfamu maggaaras/golgaa banuun hanga danda'ame bakka ciisicha keessaniitti ifti akka ifu taasisaa kan jedhudha.
Ilaalcha/barmaata 6 - Kurruufuun yeroo mara miidhaa hin qabu kan jedhu
Kurruufuun miidhaa kan miidhaa hin qane ta'uu danda'a, garuu rakkoo walxaxaa hirriba waliin walqabatuu ta'uu danda'a.
Kurruufuun yeroo hirribaa laagaan sirriitti banamee akka dhiphatu waan taasisuuf akka namoonni yeroo gabaabaadhaaf afuuraa citan taasisuu danda'a.
Namoonni rakkoo kanaa qaban yeroo hedduu carraa dhiibbaa dhiigaa qabaachuu, rukkutaa onnee bu'ee ba'uufi onneen dhaabbachuu ykn dhiigni sammuutti dhangala'uun isan mudachuu danda'a.
Kanaaf mallattoon beekamaan tokko cimsanii kurruufuudha.
Dr. Rebecca'n yeroo goolabdu: "Hirribni wanta baayyisee barbaachisaa nuti har'uma galgala irratti xiyyeeffachuun fayyaa keenya, muudii/miira keenyaa, haala waliigalaa fayyaa keenyaafi dheerina umurii keenyaa foyyeeffachuu dandeenyudha."